Influ2: Otu Aka-Dabere Ahịa-Dabere Marketing (ABM) Advertising Platform | Martech Zone
Nnabata emela mkpebi, ndị mmadụ do. Azụmaahịa Dabere na Akaụntụ (ABM) Ihe omume a na - aga n’iru ihe ndekọ banyere ọkwa dị oke mkpa mana ọ na - agwa ndị mmadụ okwu n’ogbugbu ya. Influ2 na-akọwa nke a dị ka mmemme ABM dị elu ebe atụmatụ ndị gụnyere gụnyere:
Dọrọ na otu ịzụta otu. Gaa gafee ịhọrọ akaụntụ ahụ: ị ga - enyocha ndị na - eme mkpebi na - azụta ihe dị iche iche nke akaụntụ gị. Gaa na nkọwa nke ICP gị iji tinye ndepụta nke ndị na-eme mkpebi ịchọrọ ịga na mmemme ABM gị dị elu.
Izi ozi nkeonwe Ikike ịgwa ndị a kapịrị ọnụ okwu ga-eme ka ịhazigharị gị na ọkwa ọzọ. Ndị na-eto eto na-eto eto na-eche dị iche na ndị isi ọkwa C. Tinye asụsụ kwesịrị ekwesị iji zipu ozi dị mkpa na mmadụ dị iche iche.
Jiri ọwa nkwukọrịta nke mmadụ. Akaụntụ dabere na mmepe mmepe ahịa dị ka ịchụpụ ma ọ bụ Salesloft dochie anya mkpọsa email-ezubere iche iji mee ka nkwukọrịta mara nke ọma. Emepụtara Influ iji mee ka mgbasa ozi nkeonwe n'otu ọkwa ahụ.
Multi-aka ahịa njem. Mee ka mmadụ tinye aka na ya itinye aka na njem dị iche iche. A click na a akụkọ ad nwere ike ịkpalite email na a njikọ ibudata akụkọ. Enwere ike itinye onye nwere mmasị n'otu isiokwu n'otu mkpọsa gbasara isiokwu a. Ndị mmadụ na ndị webinar nwere ike ịnata mgbasa ozi ndị na-abịa. Nwere ike iche banyere ọtụtụ puku njem ọtụtụ-aka nwere ike ịmeghe site na usoro mkpebi ABM dị elu.
Influ2: Mgbasa Ozi Ndi mmadu na ABM
Mmetụta2 bụ usoro ahịa azụmaahịa nke ndị na-ere ahịa B2B, ọ na-ekwukwa banyere nkwekọ nkwekọ dị n'etiti ọrụ mgbasa ozi na ire ahịa. Ọ na-anapụta ahịa ọdịnaya dị irè, yana ịmepụta mmekọrịta bara uru na ndị ahịa nke na-ebute azụmahịa emechiri emechi.
na Mmetụta2 nzọụkwụ ọ bụla nke njem ndị ahịa (site na mmata ọkwa kachasị elu ma na-achọ ọkwa ọgbọ na ahịa na mgbalị ndị na-ejide ahịa) na-ewusi ike site na mgbasa ozi ezubere iche. Na Influ2, azụmaahịa nwere ike:
Ebumnuche Ebumnuche Ndị Mkpebi - Họrọ ndị dị mkpa n'ime akaụntụ ezubere iche iji hụ mgbasa ozi gị. Jikọọ CRM ma ọ bụ sọftụwia azụmaahịa gị iji mekọrịta atụmatụ gị na ahịa ma ọ bụ olulu ahịa gị. Influ2 na-enye njikọta na isi CRM niile na ngwanrọ akpaaka ngwanrọ, dịka Salesforce, HubSpot, Marketo, Outreach, na ndị ọzọ.
Hazie Maka yerzụ Onyeji - Mepụta ozi dị iche iche dị iche iche maka mmadụ dị iche n’ime otu akaụntụ. Debe ya maka ọrụ ọrụ onye ahụ ma ọ bụ mpaghara ọrụ ya. Wouldn't gaghị agwa VP nke ịre ahịa otu ụzọ ị ga - esi gwa onye isi na HR, yabụ gịnị kpatara ị ga - eji gosi ha otu mgbasa ozi ahụ?
Sochie Onyinye Mgbasa Ozi Onwe Onye - Mmetụta ọ bụla, pịa, gaa, na / ma ọ bụ njikọ aka bụ akara ebumnuche. Influ2 na enye gi ohere ichoputa ha nile n’otu n’otu. Jiri data a ka ịhazi iji nweta nghọta ka mma banyere itinye aka na ozi gị bụ maka otu akaụntụ na ndị mmadụ n'ime akaụntụ a.
Chọpụta Ebumnuche Ndị Jikere Njikere Na Ọnọdụ Bekpa Ahụ - Akara omume na-enye gị ohere ikpughe atụmanya-njikere atụmanya na akụkọ ị na-agaghị achọpụta ma ọ bụghị. Influ2 na-emetụta mmetụta mgbasa ozi gị na onye ọ bụla ị na-ezube ma gbanwee ya ka ọ bụrụ akara akara ka ị nwee ike ịchọpụta onye ruru eru nke kachasị mkpa. Ọ bụrụ na onye ahụ pịa na mgbasa ozi gị ugboro abụọ, wee tinye ihe karịrị 120 sekọnd na peeji nke ọdịda gị wee laghachi na webụsaịtị gị ugboro abụọ n'ime otu izu, nke ahụ bụ akara siri ike nke onye ahụ nwere mmasị na njikere ikwu. Influ2 na-esochi nkwa ndị a niile ma tụgharịa ha ka ọ bụrụ akara akparamagwa ka ndị ahịa gị na ndị ahịa gị nwee ike ime ha.
Mgbasa ozi ndị mmadụ na-enyere anyị aka site n'ịhụ na a na-eru ndị na-eme mkpebi B2B ziri ezi tupu aka ahịa, nke na-eme ka ihe ịga nke ọma na-abawanye site na ịbawanye nzaghachi nzaghachi na mbọ a na-ere.
Stephen Ngo, Onye Ọkwa Digital, Profitwell
Mmetụta2 na-arụ ọrụ n'ofe mgbasa ozi niile, gụnyere Facebook, Twitter, LinkedIn, Yahoo, na Mgbasa ozi Google.
DISCO Jiri Ikpe
Enweela ihe omume nke mmadụ na nọmba ekwentị ọfịs na-adịghị arụ ọrụ n'ihi ọrịa ahụ na-efe efe, onye ndu teknụzụ iwu AKWỤKWỌ gbalịsiri ike iru ndị ha chọrọ - ndị ọka iwu na ngalaba ụlọ ọrụ iwu - ma kọọ njikọ aka.
Atụmatụ azụmaahịa ọhụrụ nke mmadụ Influ2 sụrụ ụzọ nyeere DISCO aka imeri nke a ma banye n'ihu ndị ahịa nwere ike ịre mgbe ha na-arụ ọrụ kachasị. N'agbata Septemba 2020 ruo Machị 2021, DISCO nwere ike iru ihe karịrị 30,000 iji gafee akaụntụ 24,000. Ihe ngosi 548,805 mere ka pịa 794, nleta 497 wee chụọ ohere 2,000 na ndị na-eme mkpebi. DISCO jikọtara Salesforce na ikpo okwu Influ2 yabụ ndu ndị gara ahịa.
Tọ oge Mmetụta 2
Tags: abmahia di na akaụntụmgbasa ozi ezubere ichefacebook mgbasa ozimgbasa ozi googlegoogle mgbasa oziMmetụta 2linkedin mgbasa ozipersonanjirimara mmadụkeonwendị ahịamgbasa ozi twitteryahoo mgbasa ozi